पुरानो शैलीको चिकन र पक्राउ - व्यंजनहरु
फ्रञ्चमा फ्रान्सेली प्याज डुब्दा कति लामो समय सम्म रहन्छ
म कहिलेसम्म कुखुराको खुट्टा उमाल्छु
तपाइँ के साथ कुखुरा पिकाटा सेवा गर्नुहुन्छ
प्रिमेड कुकी आटाको साथ पिजुकी कसरी बनाउने
पुरानो शैलीको चिकन र पक्राउ
पुरानो शैलीको चिकन र पक्राउ एक परिवार मनपर्ने खाना छ कि दुबै आरामदायक र स्वादिष्ट! यो सजिलो नुस्खा स्क्र्याचबाट सिर्जना गरिएको छ एक सजिलो घरेलु ब्रोथमा टेन्डर डम्प्लि and्ग र रसिलो चिकन सहित।
यो नुस्खा शाकाहारी र मसाला लगाएको कोमलताको साथ पूर्ण चिकनको साथ सुरू हुन्छ। प्यान्ट्री सामग्रीका साथ बनाइएका साधारण पकौलाहरू ब्रोथमा मोटो र टेंडर सम्म सिमी गरिन्छ। यो एक परिवार मनपर्ने हो कि बारम्बार अनुरोध गरिनेछ!
घर बनाइएको चिकन र पकौडी राम्रो ओएलको 'आराम खाना यसको उत्तम मा खाना हो। जबकि म चाँडो र सजिलो प्रेम गर्दछ क्रक पॉट चिकन र पक्राउ , त्यहाँ खाना जस्तो केहि पनि छैन जुन पूर्ण रूपमा घर बनाउँदछ।
स्क्र्याचबाट पुरानो शैलीको कुखुरा र पकाउने बनाउने तपाईंको सोचाइको भन्दा सजिलो छ। धेरै जसो शराबलाई उमालेरो बनाउन छोडिन्छ जब यो स्वादपूर्ण हुँदैन र कुखुरा कोमलतामा पकाइन्छ।
यो नुस्खा कुखुरा, प्याज र स्टोभमा गाजरको साथ सुरू हुन्छ। शोरबा बनाउँदा म ठूलो प्याज छान्छु र छालामा अतिरिक्त र leave्ग र स्वाद थप्न छालामा छाडिन्छु। बेसी पत्ता, कुखुराको मसालाको चुटकी र ताजा अजमोदको रूपमा तपाइँको मनपर्ने जडिबुटीहरूमा थप्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। एक पटक कुखुरा पकाएपछि, यो तरकारीसँगै शोरबाबाट हटाइन्छ।
हामी साईड डिशको रूपमा भेजीहरू खान चाहन्छौं तर गाजर र अजवाइन काट्न स्वतन्त्र महसुस गर्दछौं र तिनीहरूलाई तपाईंको शुन्यमा पुन: जोड्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ कहिल्यै सोच्नुहुन्छ कि कसरी स्क्र्याचबाट डम्पलिंगहरू बनाउने, तपाइँ तिनीहरूलाई मन पराउनुहुनेछ कि ती कति सजिलो छन्! जबकि केहि व्यक्तिहरू उनीहरूलाई बिस्किकका साथ बनाउन चाहान्छन्, म पाउँदछु कि ती सामग्रीहरू बनाउनको लागि तिनीहरू यति सजीलो थिए कि तपाईंले सायद पहिले नै आफ्नो पेन्ट्रीमा राख्नुभएको छ!
तपाईका पकौडीहरूलाई परिपूर्ण बनाउन धेरै नखोज्नुहोस्, उनीहरूले कसरी काट्छन् भन्ने कुराले खास फरक पार्दैन। केवल एक चीज तपाईं पक्का हुन चाहानुहुन्छ कि तपाईंको आटा करिब १/ ”” बाक्लो बनाइएको छ। यसले डम्प्लि theहरूलाई उत्तम स्थिरता दिन्छ।
ओभनमा स्टेक काबोब्स कसरी पकाउने
खाना पकाउनको अन्त्यमा, हामी बदामलाई पकाएपछि केही बेर कोर्नस्टार्च र पानीको साथ ब्रोथ गाढा बनाउन चाहन्छौं। केवल बराबर रकमहरू सँगै मिक्स गर्नुहोस् र एक पटकमा थोरै थप्नुहोस् जबसम्म शोरबाले इच्छित स्थिरतामा पुग्दैन। यदि तपाइँ एक क्रीमियर शोरबालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ भने, एकपटक पकौरा पकाएपछि अलिकति दुध वा भारी क्रीम थप्नुहोस्।
9.9बाट3 333भोट समीक्षारेसिपी
तयारी समय० मिनेट कुक समय१ घण्टा पन्ध्र मिनेट कुल समय१ घण्टा चार मिनेट सर्भिंगहरू। सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन पुरानो फेसन भएको चिकन र डम्प्लि्ग पारिवारिक मनपर्दो खाना हो जुन दुवै आरामदायक र स्वादिष्ट हुन्छ! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ कुखुरा टुक्राहरूमा काट्नु
▢3 ठूलो गाजर तेस्रोमा काट्नुहोस्
▢3 डाँठ अजवाइन तेस्रोमा काट्नुहोस्
▢। कप कम सोडियम चिकन ब्रोथ
▢नुन र स्वादको लागि मिर्च
▢बे पात वा कुखुरा मसाला को एक चुटकी वैकल्पिक
▢१ ¾ कप पीठो थप धुलोको लागि अतिरिक्त
▢⅓ कप छोटो पार्दै
▢½ चम्मच बेकिंग पाउडर
▢¾ कप दूध
▢½ चम्मच नुन
▢। चम्मच कर्नस्टार्च
▢गार्निशको लागि अजमोद
ठूलो भाँडोमा कुखुरा, प्याज, गाजर र अजवाइन जोड्नुहोस्। मौसम स्वाद गर्न।
कुखुराको ब्रोथ थप्नुहोस्। एक फोकामा ल्याउनुहोस्, तातो कम गर्नुहोस्, र mer 45-60० मिनेट सम्म कभर वा कुखुराको कोमल नभएसम्म उमालेर ल्याउनुहोस्। ब्रोथ सिमरिंग हुँदा, तल पकाउनेहरू तयार गर्नुहोस्।
ब्रोथबाट कुखुरा र तरकारीहरू हटाउनुहोस्। छाला र हड्डीहरू छोड्नुहोस् र बाँकी कुखुरा काट्नुहोस्, अलग राख्नुहोस्।
बिस्तारै ब्रोथमा पकौला जोड्नुहोस्। १mer-२० मिनेट वा टेन्डर सम्म उमालेर।
ब्रोथमा कुखुरा (र तरकारीहरू चाहानुहुन्छ) चलाउनुहोस् र २- minutes मिनेट वा माथी नहाले सम्म पकाउनुहोस्।
छोटो मिठो नभएसम्म पिठो, बेकिंग पाउडर, नुन र काँटासँग मिसाउनुहोस्।
एक पटकमा दूध थोरै थप्नुहोस् र संयुक्त नभएसम्म मिस्नुहोस् (तपाईंलाई यी सबैको आवश्यक नहुन सक्छ, तपाईं नरम तर चिपचिलो आटा चाहानुहुन्छ)।
आटा राम्रो नभएसम्म फ्लोर गरिएको सतहमा केहि समय घुमाउनुहोस्।
उदारतापूर्वक आफ्नो सतह पीठो र आटा बाहिर roll ″ बाक्लो रोल। १ ″ x २ ″ स्ट्रिपमा आटा काट्नुहोस्। टाँसिनबाट जोगिन उदारतापूर्वक फ्लो गर्नुहोस्।
माथि निर्देशित रूपमा शोरबा मा कुक।
मोटो BROTH (वैकल्पिक)
एउटा सानो कटोरामा table टेबलस्पून पानीको साथ table टेबलस्पून कर्नेलस्टार्क जोड्नुहोस्।
चाहिएको स्थिरतामा पुग्नको लागि एक पटकमा उमालेको शोरमा थोरै थप्नुहोस्।
गाजर र अजवाइन पक्ष मा परोस वा काटिन र कुखुराको साथ शोरपमा थप्न सकिन्छ। प्रदान गरिएको पोषण जानकारी एक अनुमान हो र खाना पकाउने विधिहरू र प्रयोग गरिएको सामग्रीको ब्रान्डमा फरक हुनेछ।
क्यालोरिज:4 464,कार्बोहाइड्रेट:32g,प्रोटिन:२g,मोटो:25g,पागलिएको बोसो:।g,कोलेस्ट्रॉल:। 73मिलीग्राम,सोडियम:322मिलीग्राम,पोटासियम:9 9मिलीग्राम,फाइबर:१g,चिनी:3g,भिटामिन ए:60०60०IU,भिटामिन सी:4.मिलीग्राम,क्यालसियम:77मिलीग्राम,फलाम:२.8मिलीग्राम
कीवर्डकुखुरा र पकौडी, स्क्र्याच, होममेड, पुरानो फेसनयुक्त चिकन र पक्राउ कोर्समुख्य मार्ग पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।
अधिक रेसिपीहरू तपाइँ प्रेम गर्नुहुन्छ
क्रक पॉट चिकन र पक्राउ
Ing इन्ग्रेडियन्ट चिकन चामल पुलाव
क्रीमयुक्त चिकन नूडल पुलाव (स्क्र्याचबाट)